एकैपटक यति धेरै रूपैयाँ बढ्यो सुनको भाउ, चाँदीको कति ! - jagritikhabar.com
एकैपटक यति धेरै रूपैयाँ बढ्यो सुनको भाउ, चाँदीको कति !
लगातार घटेको सुन-चाँदीको मूल्य आज बढेको छ।
बिहीबार सुन प्रतितोला ९८ हजार ६ सय रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै, चाँदीको मूल्य प्रतितोला १३ सय पाँच रूपैयाँ पुगेको छ।सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिन सुन प्रतितोला ९७ हजार दुई सय रुपैयाँ र चाँदी प्रतितोला १२ सय ९० रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस हिसाबमा आज सुन प्रतितोला १४ सय रूपैयाँ र चाँदी प्रतितोला १५ रूपैयाँ बढेको हो।
यो साताको पहिलो दिन आइतबार सुन प्रतितोला ९९ हजार रूपैयाँ र चाँदी प्रतितोला १३ सय रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो। उक्त मूल्यमा दैनिक गिरावट देखिएको थियो। आज भने सुन-चाँदीको मूल्य बढेको हो। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सुनको मूल्य बढेर प्रतिऔंस १९ सय अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ। अघिल्लो दिन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔंस १८ सय ६५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भएको थियो।
घट्यो डलर र दिनारको भाउ, यस्तो छ आजको विनिमय दर
बिहीबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १६ पैसाले घटेर १२१ रूपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १२२ रूपैयाँ ५७ पैसा पुगेको छ। अघिल्लो दिन अमेरिकी डलर एकको खरिददर १२२ रूपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १२२ रूपैयाँ ७३ पैसा पुगेको थियो। युरोपियन युरो एकको खरिददर पनि २ पैसाले घटेर १२८ रूपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १२९ रूपैयाँ पुगेको छ।
त्यस्तै, आज अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६ रूपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ८७ रूपैयाँ ४० पैसा पुगेको छ। क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ३६ पैसाले बढेर ९५ रूपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ९५ रूपैयाँ ७२ पैसा पुगेको छ।
आज साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३२ रूपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ३२ रूपैयाँ ६८ पैसा कायम गरिएको छ। कतारी रियाल एकको खरिदमा भने नेपाली ३३ रूपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीमा ३३ रूपैयाँ ५७ पैसा पाइन्छ।
युएई दिराम एकको खरिददर आज ३३ रूपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर ३३ रूपैयाँ ३७ पैसा कामय छ। मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर भने २८ रूपैयाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर २८ रूपैयाँ १५ पैसा पुगेको छ।
आज कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९ पैसाले घटेर ३९७ रूपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ३९९ रूपैयाँ ६९ पैसा पुगेको छ। अघिल्लो दिन कुवेती दिनार एकको खरिददर ३९८ रूपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर ३९९ रूपैयाँ ६९ पैसा थियो। बहराइन दिनार एकको खरिददर भने ३२३ रूपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर ३२५ रूपैयाँ १२ पैसा कामय छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निर्धारण गर्ने विदेशी मुद्राको विनिमय दर फरक हुन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। तर भारतीय मुद्राको विनिमय दर नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरे बमोजिम नै हुन्छ, जुन अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फरक हुने गरी निर्धारण गर्न सक्दैनन्।